‘Famoronana tsingevana eo amin’ireo toetra mifanohitra’: tafatafa niarahana tamin’ny mpanakanto Parastou Forouhar · Global Voices teny Malagasy
Forouhar, teraka Iraniàna, monina sy miasa ao Alemaina hHatramin'ny 1991
Voadika ny 15 Janoary 2022 11:37 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Español, Italiano, Nederlands, 日本語, English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Desambra 2019)
Parastou Forouhar, Water Mark, fanomezam-boninahitra an'ireo mpitsoa-ponenana rendrika an-drano, 2015. “Ity asa ity dia noforonina tao anatin'ny sehatry ny fandaharanasa fonenan'ireo mpanakanto Brodsky Center,” Anjerimanontolo Rutgers, ary fiarahamiasa tamin'i Anne McKeown sy Randy Hemminghaus, faratampony amin'ny fanamboarana taratasy sy fanontàna boky ao amin'ny Brodsky Center.” Sary natolotr'ilay artista.
I Parastou Forouhar, artista safiotra Iraniana-Alemàna monina any Alemàna, dia fantatra amin'ny famoronana ireo asakanto avo lenta izay ahitana “ny fampiarahana ny firindràna sy ny hatsaràna, ary koa ireo sosona hafa maneho ny herisetra sy ny fihetsehampo mahatsapa tsy fandriam-pahalemana sy fikombonana.”
Manana endrika tantaram-piainany manokana, ny asany dia mampiasa kazarana fitaovana maro, anisan'izany ny fametrahana, ny fanentanana, ny sary nomerika sy ny fakàna sary.
Tamin'ny 1991, nandao an'i Iràna i Forouhar ary nipetraka tany Alemàna izay nahazoany ny diplôma ‘doctorat’ momba ny zavakanto. Naranty betsaka tany amin'ireo efitrano fampirantiana zavakanto sy mozea tao Iràna ary tany Alemana, Aostralia sy New York ny asany, ary mety ho hita ihany koa any anatin'ireo angona maharitra an'ny Parlemanta Alemàna ao Berlin sy ny Mozea Britanika ao Londona.
Mpampianatra Beaux Arts ao amin'ny Mainz Academy of Fine Arts tao Alemaina i Forouhar. Ankehitriny dia hita ao amin'ny fampirantiana iraisan'ireo vehivavy Iraniàna artista ny asany, izay antsoina hoe A Bridge Between You and Everything (Tetezana iray eo aminao sy ny zavatra rehetra), nokarakarain'ilay mpakasary malaza Shirin Neshat tao amin'ny High Line Nine gallery ao New York City (7 Novembra-14 Desambra).
Ireto ny tsonga sasantsasany tamin'ny tafatafako niaraka tamin'i Forouhar:
Parastou Forouhar, The Eyes (Ireo Maso), 2018. Sary an'ny artista.
Omid Memarian: Mampahatsiahy fitondrana pôlisy sy famoretana pôlitika ny angona “Eyes / Maso” nataonao. Mandritra izay fotoana izay ihany koa, ireo tsipika miolikolika, ireo marika miverimberina sy ny fampiasana ny loko mainty sy fotsy dia maneho firindràna iray sy fitoniana izay mifangarika amin'ny hevitra vohizin'ilay asa. Ho ahy izay mijery, nanafintohina io. Iràna no manahirana anao, saingy toy ny ho an'izao tontolo izao io fitantaràna io. Inona no mandrisika an'ity angona ity?
Parastou Forouhar: Nanasongadina zavatra izay heveriko ho tena fototry ny ankabeazan'ny asako ianao. Ny fampifanarahana ireo fijery mifanohitra – ny fampiarahana ny firindràna sy ny hatsaràna, izay mivoitra ao anatin'ireo modely sy ny fivondronan'izy ireo anatin'ny topimaso voalohany, ary koa ireo sosona hafa izay mampiseho ny herisetra sy ny fihetseham-po mahatsapa tsy fandriam-pahalemana sy fikombonana. Lasa mibaribary ny ankamaroan'ireto sosona farany ao anatin'ny topimaso faharoa. Ny tena marina, amin'ny fampandraisana anjara ny mpijery iray anatin'ny asa taokanto, andramako ny mampiseho hoe ahoana no fomba fijery zavatra ary fandinihana azy ireny. Te-hanery ny mpijery aho mba hijery amim-pitandremana tsara. Araka izay nanamarihanao azy sangy tamin'ny fomba hafa, io fisiana tendro roa sy io fifanoherana anaty fomba fijery io, na ny fifangarihan'ireo tranga mifanohitra, dia anisan'ny fepetra sôsialy/maha-olombelona. Hitanao ny fisehony ao Iràna, saingy tsy voafetra amina fiarahamonina tokana izany. Na, araka izay efa voalazanao, fitantaràna iray manerantany io.
Fony niasa nanao ny andiany “Maso” aho, izay iray amin'ireo asako vao haingana, dia nahatsapa karazana krizy mavesatra. Misy ireo krizy sosialy mamantsika fatratra antsika ary toy ny hoe ngolin'ny tebiteby isika, tsy afaka mandresy azy ireny. Mihoatra ny zavatra rehetra, teraka avy amin'ireo krizy ara-tsaina sy ara-pihetsehampo nolalovako ity angona ity, na ny herisetra izany na ny famoretana tsy misy farany ao Iràna, ny firodanan'ny sosialy vokatr'ireo ady maro samihafa ao Afovoany-Atsinanana, ireo fifandonana mitombo miaraka amin'”ilay Hafa” sy ny fasisma ao Eorôpa, izay iainako sy iasako, na ihany koa ny habibiana miharo fo vato atao amin'ireo mpangataka fialokalofana etsy sy eroa.
Parastou Forouhar, MENA NO ANARAKO MAITSO NO ANARAKO III, 2015. Sary nomerika teo amin'ny Photo Rag, 80 x 80 cm. Sary natolotr'ilay artista.
OM: Ny politika, herisetra, fanavakavahana, tsy fitoviana ary ny hirifiry no tena lohahevitra lehibe ao anaty asanao, anisan'izany ny “Eyes”, “Watermark” sy ny “Red is my Name.” Indraindray izy ireo dia azo avahana mazava tsara, ary indraindray kosa ilàna ezaka be hitadiavana ny fifandraisana misy amin'ireo fambara isankarazany sy ireo kasinga. Inona no mahatonga anao mamorona an'io karazana firindràna io ao anatin'ireo famantaranao miverimberina?
PF: Miasa amin'ireo traikefa azony teo amin'ny fiainana ny artista tsirairay. Ny zavatra niainana no manome endrika ireo fihetsehampon'ny olona sy ireo fantsom-pahatakarany. Nitombo teo anivona fianakaviana iray aho ary tanatina vondron'olona izay ny tena nimatimatesana indrindra teo amin'ny fiainana dia ny hiady ho an'ny fahafahana sy ny rariny teo ambany vahohon'ny mpanjaka faharoa avy amin'ny Taranaka Pahlavi. Saika nandany ny androantokom-piainany amin'ny maha-mpifonja ara-politika azy ny raiko sy ny reniko ary ireo olona marobe manodidina ahy. Teo amin'ny fahatanorako, vavolombelon'ny revolisiona Iraniàna sy ny adin'i Iràna sy Iràka aho, ary koa ny famongorana mahery vaika nampiharin'ny governemanta Iraniàna tamin'ireo mpanohitra ara-politika, narahin'ny fifindràmonina sy ny fandroahana hiala ny tanindrazako… Ireo trangan-javatra niainana ireo no nahatonga ny fihetsehampo maha-olombelona ahy ary nampivoatra ny kanto tato anatiko. Ny teniko sy ireo endrika artistika ataoko dia nifototra tamin'ireo fanaingoana sy ireo endrika notsongaiko tsikelikely nandritra ny taona maro ary nohezahiko nampiasaina mba hanehoana ny kantoko. Ny rafitra fanaingoana dia nahafahako nampiseho taharon-kafatra hita maso sy miafina, namorona hatsaràna, fahamarinan-toerana ary firindràna miaraka amin'ireo antsipirihany, izay mahatonga anareo ho latsaka ao anaty fangitangitahana sy saritaka voarindra. Andramako ny mamorona izay mety hisian'ny tsingevana eo anelanelan'ireo toetra mifanohitra izay hampiditra ara-pihetseham-po sy ara-tsaina an'ireo mpijery sy hanao izay hametrahan'izy ireo fanontaniana. Amin'ny fijery ara-teknika, maro amin'ireo asa no noforonina ara-nomerika sy navoaka tamina fampiasana ireo rindrambaiko infôrmatika.
Parastou Forouhar, Efitra Voasoratsoratra. Sary: Marc Domage. Sary natolotr'ilay artista
OM: Maro amin'ireo asanao no midadasika. Raha tokony ho voafaritra sy ahantona amin'ny rindrin'ny trano fampirantiana izy ireo, dia ny efitrano iray manontolo no bahanany, ka lasa toy ny hoe zavatra iainana iombonana no tsapan'ireo mpijery.
PF: Afaka mamorona fifandrohizana akaiky sy mifampimpiditra be ianao rehefa renoka anatin'ny endrika artistika iray ny mpitazana, fa tsy hoe hijoro fotsiny eo anoloanao. Hitako mirindra miaraka amin'ny asako io endrika io. Maka ny fifehezana sy manova ny habaka ireny asakanto natokana ho ana toerana iray voafaritra ireny. Amin'ny maha-mpifindra monina, singa iray nametraka fanamby hatrany ny habaka (toerana). Tsapako fa ny faniriana hanova ny habaka dia, raha entina lavidavitra kokoa, mifandray amin'ireo zavatra niainana tamin'ny fifindramonina sy ny tolona hanokatra ny habaka anao manokana. Mihevitra aho hoe azonao atao ny mahita ny soritr'ireny asa miavaka ireny fony aho sambany nanomboka ny maha-artista ahy taorian'ny nahavitako fianarana avy any Alemaina, tany amin'ny tapaky ny andian-taona 1990s. Heveriko fa ny asako voalohany nanana izay soritra manokana izay dia ny “The Written Room.” Tamin'ny 1999 izy io no naranty voalohany ary ny tena vao haingana indrindra nasehoko an-tsehatra volana vitsy lasa izao. Io koa no asako nitety tany betsaka indrindra.
Parastou Forouhar, Zoma Fakàna sary mitsinjara efatra. Sary natolotr'ilay artista.
OM: Tamin'ny 1988, maty tany Iràna novonoin'ireo mpitandro filaminana nirahan'ny mpitondra ny ray aman-dreninao, ary nanomboka teo dia mitaky ny rariny sy izay tomponandraikitra tamin'ireny heloka pôlitika ireny ianao sady miezaka ny mitahiry ho velona ireo fahatsiarovana ny ray sy reninao. Ahoana no fiantraikan'io amin'ireo hetsika artistika ataonao?
PF: Tsy isalasalàna fa nametraka vesatra be hozakaiko eny foana ny famonoana pôlitika nanjo ny ray aman-dreniko. Hiraikitra mandrakariva miaraka amin'ny olona ny zavadoza tahaka ireny. Efa niezaka hatrany aho ny tsy hitambesaran'io zavadoza io ary amin'ny maha-olombelona, mba hisetra izany amin'ny fomba maha-tomponandraikitra ara-tsôsialy. Nifandimby teny ny taona, nankahezry hatrany ny fianakavian'ireo hafa niharan'ny heloka pôlitika tao Iràna aho, tamin'ny fitadiavana ny rariny sy ny fampivoarana kolontsaina iray mitodika amin'ny fahatsiarovana. Tsy azo lavina fa lasa pôlitika kokoa ny nataoko ary hita maso any anatin'ny asa famoronana artistika ataoko ny fiantraikan'io. Fa mandritra izany ihany, noezahako hatrany ny hitàna ireo fahasamihafàna fototra misy eo amin'ny pôlitika sy ny zavakanto, ary nosorohako ny fanararaotana azy ireo mba hakàna tombony, na amin'ny fomba mahasoa io na manimba.
Dariush sy Parvaneh Forouhar novonoina tamin'ny fomba feno habibiana tao an-tranon'ny fianakavian-dry zareo tany atsimon'i Tehran tamin'ny 22 Novambra 1998. Dariush, 70 taona, dia voatsatoka antsy in-11. Ny vadiny, izay zandriny 12 taona, voatsatoka antsy in-24. Sary natolotr'ilay mpanakanto.
OM: Mivezivezy matetika eo anelanelan'i Iràna sy Alemaina ianao, ary any amin'ny firenena hafa koa. Inona no fiantraikan'ireo telopolo taona niainana, tamina kanto sy fivezivezena tany Andrefana teo amin'ny maha-ianao anao?
PF: Hatreto, ny antsasaky ny fiainako no nolaniako tao Alemaina. Ity ampahany faharoa amin'ny fiainako ity dia nanefy ny asa maha-matihanina ahy ka rehefa injay aho misaina sy miteny amin'ny alàlan'ny kantoko dia ny Alemàna no tonga ao an-tsaiko ho toy ny fiteny voalohany. Ao Alemaina sy any amin'ireo firenena hafa, dia ny artista safiotra alemàna-iraniàna no anondroana ahy. Toy ny mpifindramonina no fahitàko ny tenako, izay avy amina kolontsana samihafa. Voasarik'ireo faritra eo anelanelany aho. Miaraka amin'io traikefa sy fiainana niainana io, dingana iray izay ifanontofan-javatra maro ny maha-izaho ahy. Velona sy misosa tsara io, mifanohitra amin'ny tsy miova sy henjana.